सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं - NaulooDhun
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस :परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
बैशाख २२ – अर्घाखाँची जिल्लाकाे भूमिकास्थान नगरपालिका स्थाई घर भई बेलवासमा बस्ने रामप्रसाद भुसालले काेभिड उपचारकाे लागि घर राज्यलाई दिने घाेषणा गर्नुभएकाे छ ।
सामाजिक सन्जाल फेसवुक मार्फत करिव २० ओटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने ठाउँ सहित आफ्नाे घर राज्यलाई दिन तयार रहेकाे बताउनुभएकाे हाे ।यदि राज्यले आबश्यक ठान्छ भने काेराेना अवधीभरकाे लागि आफू भाडामै बसेर भएपनि घर दिन तयार रहेकाे भुसालले बताउनुभयाे ।
भुसालले गतवर्ष भूमिकास्थान ३ रातामाटामा रहेकाे आफुले पढेकाे अन्नपुर्ण माध्यमिक बिद्यालयमा नगद ५ लाख सहयाेग गर्नुभएकाे थियाे । राम शर्मा कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढेको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर बागलुङ नगरपालिकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो समयमा स्थानीय सरकारले दैनिक ज्याला मज्दुरी गरेर घर चलाउने मानिसहरुको लागि विशेष ध्यान जानुपर्ने छ । उनीहरुको अवस्थ कस्तो छ भनेर बुझने र राहातको व्यवस्था मिलाउने काम स्थानीय सरकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको समस्या समाधान गरिएन भने आफ्नो परिवारको पेट पाल्नकै लागि कोरोना जोखिममा घर बाहिर निस्कनपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
नियमित औषधी सेवन गर्ने मानिसहरुको तथ्याङ्क संकल गरि उनीहरुलाई घरमै औषधी पुराउने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । साना तिना बिरामी भएर अस्पतालनै पुग्नु पर्ने वातावरण आउन नदिनका लागि डक्टरहरुलाई फोन मार्फतनै सुझाव लिनका लागि त्यो वातवरण सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्ने हुन्छ । अवको समयमा हाम्रा अस्पतालहरुमा औषधी र अक्सिजनको कमी हुन नदिनका लागि स्थानीय सरकाले महत्वपुण भूमिका निवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यापारीले यही हो मैका भनेर खाद्य सामग्रीको मुल्य बढाउने र सामान लुकाउने प्रविधी बढ्ने भएकाले यस्तो कठिन समयमा सबैले मानवीयत देखाउने पर्ने हुन्छ र यस्ता खालका गतिविधि रोक्नका लागि सम्बन्धित निकाय सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सवैभन्दा प्रभावित भएका विद्यार्थीहरु हुन् । सधै शिक्षकहरुले विद्यालयमा भर्न खुल्यो भनेर मात्र बोलाउनेभन्दा पनि यो बन्दको समयमा विद्यार्थीहरुले घरमै बसेर कसरी पढाईलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई जानाकारी गराउने र अनलाईन मार्फत पढाउन सकिन्छ । विद्यार्थीहरुलाई कोरोना महामारीको विषयमा विभिन्न सचेतनामुलक सन्देशहरु सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनबाट दिन सकिन्छ ।
कोरोनाले गर्दा निकै भयावह अवस्था आईसकेको छ । त्यसकारणले अहिले दिन प्रतिदिन कोरोना बढेको र कोरोनाबाट मृत्यु भएको खबर मात्र सुन्न देख्नमा आउँछन् । त्यस कारणले अवको समयमा मानिसहरुलाई प्रेस बनाउने खालका, मनोपरामर्श सहितका कार्याक्रमहरु टेलिभिजन, रेडियो, सामाजिक सञ्जालबाट प्रशारण गरेमा निकै फलदायी हुने मलाई लागेको छ । कोरोना संक्रमितलाई पनि मनोपरामर्श दिदा धेरै राम्रो हुन्छ । कतिपय मानिसहरु कोरोना लाग्यो भनेर हत्तोसाहित भएर आत्मबल कम भएर पनि मृत्यु भएको अवस्था छ । त्यस कारणले संक्रमितलाई हौसला प्रदान गर्ने खालका कुराहरुलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीमा वृद्धवृद्धालाई परिवारका सदस्यहरुले उनीहरुलाई राम्रो वातावरण बनाउने र सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
मंगलबारदेखि बागलुलङ नगरपालिकासहित जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुमा निषेधाज्ञा सुरु भएको छ । यो समय निकै संवेदनशील छ । कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदा बढेको अवस्था छ । यो अवस्थामा कोरोना संक्रमितलाई हौसाला दिने काम गर्नु पर्ने हुन्छ । आइशोलेसनमा संक्रमितलाई राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कठिन समयमा फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्नु भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसलाको आवश्यकता छ । आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर दिन रात नभनि कोरोना संक्रमितलाई उपचार गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरुको लागि सरकारले विशेष खालको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । अब यही गतिमा कोरोना बढ्ने हो भने हाम्रा अस्पतालमा संक्रमित राख्ने ठाउँ हुदैन् । त्यस कारणले अबको समयमा अस्पतालपछिको विकल्प के भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अस्पतालपछिको विकल्प के भनेर योजना निमार्ण गरि अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कठिन समयमा पक्षय विपक्ष भन्ने हुँदैन् । यो समयमा सबै एकसाथ भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो समयमा स्थानीय सरकारले सबैसंग समन्वय र सहकार्यको दायर फराकिलो बनाएर यो विपतको सामान गर्न र विपत न्यूनिकरण गर्नका लागि सबैखालका निकायको सल्लाहा सुझब लिएर योजना बनाएर अगाडी बढनु पर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा सबैभन्दा मारमा पर्ने भनेको मज्दुर वर्गहरु हुन । त्यस कारणले स्थानीय सरकारले सबैभन्दा ध्यान निदुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई राहातको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारी एक दुई जानाले कोरोना महामारी नियन्त्रण हुँदैन् ।
सम्बन्धित निकाय र आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापडण्ड अपनाएर सामाजिक दुरी कायम गरेर घरमै सुरक्षित बस्नु पर्ने हुन्छ । सरकारो निर्देशन मान्नु पर्ने हुन्छ । तर, सरकार पनि आम जनताको समस्यालाई बुझने र उनीहरुको समस्या पनि समाधान गर्ने वातावरण सृजना गनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बागलुङमा अब अलिकति भयावह अवस्था हुने संभावना देखिन्छ । त्यसले गर्दा सबैजना सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस कारणले पदीय जिम्मेवारी भएका मानिसहरुले मात्र काम गर्ने भन्ने हुदैन । सम्पूर्ण सचेत नागारिकहरुले चुप्प लागेर बस्ने भन्ने हुदैन । सचेत नागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट कोरोना महामारी रोकथाममा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पोहोर साल चैतको ११ गतेनै मेरै नेतृत्वमा हात धुने अभियान संचालन गरेका थियौँ । यस्ताखालका अभियान संचालन गरेमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।
बुद्धिजिवी, पत्रकार, वकिल, प्रध्यापक, सचेत नागरिकहरुले सचेतनाको अभियान संचालन गरेमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ । यी खालका वर्गलाई सरकाले परिचाल गरेमा धेरै फलदायी हुने छ । वास्तवमै हामीहरु विपतीमा छौँ । सबैले आ– आफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गरेर अगाडी बढनु पर्ने हुन्छ ।
दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको स्थिती अहिले एकदम भयावह बनेको छ । संक्रमणको तथ्याङक हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ । यसलाई तुरुनै नरोक्ने हो भने झन चर्को रुपमा कोरोना फैलने भएकाले अस्ति मात्र बागलुङमा विभिन्न निकायको बैंठक बसेर बागलुङ नगरपालिकामा निषेधाज्ञा गर्ने निणर्य भएका छ र मंलगबारबाट बागलुङ नगरपालिका लगायत अन्य पालिकामा पनि निषेधाज्ञा लागु भएको छ । निषेधाज्ञा अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता हो ।
निषेधाज्ञा गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरु पनि आउन सक्दछन् । ति समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकार योजनाबद्ध अगाडी बढन् जरुरी देखिन्छ । तत्कालनै गर्नुपर्ने कामहरु आइशोलेसन र क्वारेन्टिको राम्रो व्यवस्थापनको अवश्यकता छ । कोरोना संक्रमित दिन दिन बढेको कारणले अब आइशोलेसन अभाव हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ । त्यस कारणले अब आइशोलेसन कहाँ कसरी नमार्ण गर्ने र त्यहा चाहिने सबै खालका स्वस्थ्य समग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एम्बुलेन्स र अक्सिजनको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । धौलागिरी अस्पताल पछिल्लो समय कोभिड अस्पतालको रुपमा विकास भएता पनि त्यहाँ आईसियु बेड थोरै छ्न । अब त्यसलाई पनि बढाउनु पर्ने देखिनछ । अस्पतालमा फ्रन्टलाईनमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गरेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च गराउनका लागि सरकारको ध्यान जना जरुरी हुन्छ ।
यो समयमा सबैखालका बजेटहरु कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनु पर्ने देखिन्छ । मानिस रहे विकास भन्ने भइरहन्छ । त्यस कारणले पहिलो प्राथामिकता भनेको स्वास्थ्यलाई राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अगाडी बढनु पर्ने हुन्छ ।
यो कठिन समय हो । त्यस कारणले सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न लाग्नु पर्ने हुन्छ । सबै खालको भूमिका निवाह गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्ने भनेको ज्याला मज्दुरी गरेर घर चलाउने भएकाले उनीहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपने हुन्छ । स्थानीय सरकारले राहातको व्यवस्था मिलाउने र सबै निकायले आफुले सक्ने सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हार्दिक श्रदान्जली ! कालो ढुसी संक्र’मणबाट कैलालीमा एकजनाको मृ’त्यु,
बिबाहको उमंगमा सबै नाचगानमा थिए, बेहुली त्यही मौकामा प्रेमीसँग भागेपछि जे भयो !
बिहानै यो के भयो भारतले के गयो समय लियर पूरा हेर्नु कडा आयो सक्दो सेयर गर्नुहोला सबैले.